Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana ara-panatanjahantena » Ny Minisitry ny Fanatanjahantena Kanadiana dia miarahaba ny fanokafana ny Lalao Kanata fahavaratra 2017 any Winnipeg
Ny minisitry ny fanatanjahantena sy ny olona manana fahasembanana any Carla Qualtrough dia namoaka ity fanambarana manaraka ity tamin'ny fisokafan'ny Lalao Kanata fahavaratra 2017 tany Winnipeg ”
Miaraka am-pientanam-po sy fiandrasana lehibe ny hijerenantsika ireo atleta tanora kanadianina an'arivony avy amin'ny isam-paritany sy faritany mankao amin'ny Bell MTS Place ho an'ny lanonam-panokafana ny Lalao Kanata fahavaratra taona 2017 anio hariva.
Manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 13 Aogositra dia hanana fotoana tsy azo lavina isika hijerena ny fanehoana herim-po sy fikirizana rehefa mamporisika ny lampihazo ireo atleta. Tahaka ireo teo alohany, dia hamirapiratra eo ambanin'ny sain'ny firenena izy ireo ary hahazo ny fankafizan'ny fahavalony raha manome aingam-panahy ireo atleta ho avy any Canada.
Mino mafy aho fa ny fanatanjahan-tena dia manana fahefana hanova fiainana any amin'ireo vondrom-piarahamonintsika, izay ahafahan'ny fototr'asan'ny fanatanjahan-tena sy ny fampihetseham-batana voakarakara amin'ny alàlan'ny traikefa azo antoka, salama ary mahafinaritra eny an-tsaha, eo an-tokontany, eo amin'ny kianja filalaovana na any amin'ny pisinina. Mampianatra ny zanatsika momba ny fifehezana sy ny fahafoizan-tena ny fanatanjahantena, manatsara ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina, mamorona asa ary manome fotoana ary indrindra indrindra mandritra ny taona 150 i Canada dia mampivondrona firenena iray.
Reharehan'ny Governemantan'i Kanada ny hanohana ny Lalao Kanata fahavaratra 2017 ho an'ity 50 taona amin'ny Lalao Canada ity, amin'ny ezak'izy ireo hanehoana ireo atleta any Kanada. Faly ny governemanta manome fotoana sy fanohanana izay manamora sy mampandroso ny fahaiza-mamaky teny sy ny fanatanjahan-tena. Amin'ny alàlan'ny fanohanana mety dia afaka manohy manome loharano ho an'ireo atletantsika isika, manomboka amin'ny kianja filalaovana ka hatrany amin'ny lampihazo, ary mandrisika ny fandraisana anjara mandritra ny androm-piainana amin'ny fomba fiaina mahasalama.
Tiako ny misaotra ny tanànan'i Winnipeg sy ny faritanin'i Manitoba noho ny fandraisany ny olon-drehetra, ary koa ny mpiasan'ny Lalao Canada sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony tamin'ny asa mafy nataony. Amin'ny anaran'ny Governemantan'i Kanada, dia mirary soa indrindra ho an'ireo atleta sy mpanazatra rehetra rehefa manakaiky ny laharam-pamantarana ny hetsika fanatanjahantena eto an-toerana lehibe indrindra.
Avelao hanomboka ny lalao!